'नेपालका नेता र कर्मचारी विदेशीलाई सूचना बेच्छन् !'
काठमाडाैं | चैत २६, २०७४
नेपालले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू धेरै छन् । यथार्थपरक, स्पष्ट एवं राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी योजनाहरू तर्जुमा गर्ने हो भने यस्ता अधिकांश चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर यसरी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । विकासका सम्भावना, आर्थिक लगानी र स्रोत अभाव नेपालको चुनौती होइन । यस सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
उक्त कुरालाई छलफलमा उठाउनुभन्दा पहिला नेपालले अहिले सामना गरिरहेका केही महत्त्वपूर्ण समस्याहरूका सम्बन्धमा केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।
(१) नेपालमा बौद्धिक र बौद्धिकता दुवै कुराको चर्को खडेरी रहेको छ । यसको मुख्य कारण विदेशीहरूले उपनिवेश बनाएको हाम्रो शिक्षा प्रणाली हो । एउटा सानो बालक वा बालिकाको दिमागलाई सिर्जनात्मक र रचनात्मक हुन बन्देज गरिन्छ । उसलाई पश्मिीकरण गर्न सबै ज्ञान र साहित्य पश्चिमी जगत्को सिकाइन्छ । उसले नेपाली धरातलीय ज्ञान (इपिस्टेमी) को बारेमा केही जानकारी पाउँदैन । उसले जे सिक्छ त्यो उसले आफ्नो समाजमा पाउँदैन र उसले जुन समाजमा बस्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा उसले केही जान्दैन । उसले नेपालको इतिहास जान्न पाउँदैन, उसले नेपालका सांस्कृतिक आयामहरू जान्न पाउँदैन, उसले नेपाली साहित्य र आफ्नो भाषा पनि जान्न पाउँदैन । त्यसैले उसमा नेपाली मनोविज्ञान र राष्ट्रियताको अनुभूति हुनै सक्दैन ।
(२) प्राथमिक शिक्षाबाट यसरी भत्काइएको उसको मौलिकता माध्यमिक तहसम्म आउँदा अराजकतामा परिणत भइसकेको हुन्छ । माध्यमिक तहमा आइपुग्दा विद्यार्थी सिर्जना र रचनाहीन विद्रोहीमा परिणत भएको हुन्छ । त्यसैले उसमा आमाबाबु, समाज, संस्कृति र साहित्यप्रति अनन्त विद्रोहको भाव रहन्छ । उसले आफ्नो परिवार, समाज, संस्कृति देश सबैलाई निकम्मा देख्छ ।
(३) त्यसैले विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्र बन्नै सक्दैन । विश्वविद्यालयमा पुगेका विद्यार्थीहरूमध्ये कति विद्यार्थी संगठनमा पुगेका हुन्छन्, र उनीहरू पढाइ होइन राजनीतिका नाममा, विद्यार्थीका हितका नाममा, आफ्नो आन्दोलनका नाममा आफूमा बौद्धिकता सिर्जना गर्न छोडेर निरन्तर संस्थाकाविरुद्धमा विद्रोहको मनोविज्ञान निर्माण गर्दछन् ।
अरु कतिपय कसैको प्रभावमा, कसैको आर्जनका लागि विदेशको सपनामा दौडिन्छन् । उनीहरूको पनि आफूमा बौद्धिकता सिर्जनाको अभियानबाट बाहेक हुन्छन् । अरु कतिपय अलमलमा हुन्छन् ।
विश्वविद्यालयहरूको काम ज्ञान उत्पादन गर्ने हो । त्यसैले अनुसन्धानका कार्यहरू नै त्यहाँको मूल काम हो । तर विश्वविद्यालयमा, नेपालमा यस्तो कार्य हुँदैनन् । विद्यार्थी कक्षामा आउँदैनन् । कक्षामा विद्यार्थी नआउँदा राम्रो हुन्छ शिक्षकलाई, किनभने उसले पढाउनु पर्दैैन । पैसा कमाउने कथित शिक्षण संस्था जो मालिकहरूले लगानी गरेका छन्, उनीहरूको ध्येय त पैसा कमाउनु हो । त्यसैले नेपालको वर्तमान चुनौतीको मूल जरो त शिक्षाको निकम्मापन हो । यसको निकम्मापनले नै हो ।
(क) नेपाली बौद्धिक र कर्मचारी भनिएका मानिसमा विज्ञता नै छैन । उसले सिर्जनात्मक काम गर्नै सक्दैन ।
(ख) राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त समालोचनात्मक (क्रिटिकल) र प्रस्ट दृष्टिकोण भएका प्राज्ञिक/बौद्धिक मानिसको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा त्यसको पनि खडेरी छ ।
(ग) रचनात्मक, समालोचनात्मक एवं निर्भिक मानिसले मात्र राष्ट्रको हितमा काम गर्दछ । तर नेपालमा यो अप्राप्य छ । त्यसैले कोही गैरसरकारी संस्थामा विदेशीको पैसा हात थापेर, कोही छोराछोरीलाई विदेशी स्थायी भिसाको खोजीमा, कोही विदेश डुलेर आनन्द लिन प्रत्येक मिनेट नेपालको बिक्री गरिरहेका छन् ।
(घ) जब बौद्धिकता र देशभक्ति ओइलाउँछ, तब उत्पादकत्व पनि ह्रास हुन्छ । त्यसैले देशमा उत्पादकत्वको पनि खडेरी छ । जब उत्पादकत्व ह्रास हुन्छ, तब व्यक्ति उपभोक्तावादको सिकार हुन्छ ।
(४) त्यसैले के स्पष्ट देख्न सकिन्छ भने नेपाल स्तरहीन शिक्षाको सिकार भएको छ । स्तरहीन शिक्षा पनि व्यापारिक वस्तु भएको छ । व्यापारले शिक्षाको नैतिकता भत्काएको छैन । नैतिकताविहीन शिक्षाले व्यक्तिमा आत्मसम्मान र स्वमर्यादामा ह्रास ल्याउँछ । जब व्यक्तिले आफैँलाई सम्मान गर्दैन, उसले अरुलाई पनि सम्मान गर्न जान्दैन । किनभने अरुलाई सम्मान गर्न पहिला आफूलाई आफ्नो सम्मानको लोभ हुनुपर्छ । मर्यादा र सम्मानहीन मानिसमा ‘देशभक्ति’ को भावना नै हुँदैन । त्यसैले ऊ आफ्नो देशप्रति बफादार हुँदैन । उसले न त देशको विकासका बारेमा सोच्छ, न त आफ्नो विकासको बारेमा ।
(५) जब ‘देशभक्ति’ मर्दछ, राष्ट्र पनि मर्छ । नेपाल अहिले यस तहमा आइपुगेको छ । अहिले नेपालीहरू राष्ट्रको अस्मिता बिक्री गर्न आपत्ति मान्दैनन् ।
(क) नेताहरू विदेशीको हदैसम्मको चाकरी गर्दछन् । उनीहरू जुनसुकै नियतले जेसुकै लिन पनि तयार छन् । उनीहरू कमजोर भेडाबाख्राको खाना र आवासको व्यवस्था गर्न सक्दैनन्, तर कहिलेकाँही ब्वाँसाहरूले नेपालमा हस्तक्षेप गरे पनि वक्तव्य निकाल्छन् ।
(ख) नेपाल पढेलेखेका थुप्रै मानिस दातृसंस्थाका अगाडि हात फैलाएर प्रोजेक्ट र विदेश भ्रमणको सहयोग माग्दछन् । उनीहरू देशमै आवश्यक ज्ञान र संस्थाहरू निर्माण गर्न चाहँदैनन् ।
(ग) कर्मचारीहरू देशका सूचना विदेशीलाई बिक्री गर्दछन् । उनीहरू दलका कर्मचारी बनेका छन् । यी सबै चुनौतीहरूलाई संश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ ।
(१) नेपालको शिक्षा नेपालकै इतिहास, संस्कृति र गौरवविरोधी जगमा खडा भएको छ । यस शिक्षाको निर्माणमा एकातर्फ नेपाललाई ध्वस्त पार्ने अवान्छित विदेशी तत्वलाई साथ दिने भ्रष्ट मनोविज्ञान भएका नेता र कर्मचारी छन् । अर्कातिर शिक्षाको व्यापार गर्ने व्यापारी छन् ।
(२) कमजोर, राष्ट्र र समाजविरोधी शिक्षा प्रणालीले नेपाली स्वाभिमान बोक्ने देशभक्तिमाथि ठूलै घात गरेको छ । त्यसैले अर्को चुनौती भनेको दशेभक्तिको गिर्दो मनोविज्ञान हो ।
(३) गलत, राष्ट्रविरोधी शिक्षा र त्यसले जन्माएको ह्रासोन्मुख देशभक्तिले देशको उत्पादन प्रणाली भत्किएको छ । पहिलो कुरा त ‘उत्पादकत्व’ नै निर्माण भएको छैन । त्यसमा पनि अलिअलि पलाएको उत्पादकत्व पनि विदेशीका लागि प्रयोग भएको छ ।
यी चुनौतीका परिणामहरू
अहिलेसम्म तीनवटा कारणले नेपाल अस्तित्वमा रहेको छ । तर यसको अवस्था क्षयरोग लागेको मानिसको जस्तो छ, जो निरन्तर खोकिरहन्छ । ऊ मर्छ ,त्यो निश्चित छ । तर औषधि गर्न सके ऊ फेरि तन्दुरुस्त हुन सक्दछ । जसरी त्यो रोगी मानिसका लक्षणहरू हुन्छन्, त्यस्तै लक्षणहरू वर्तमान नेपालका पनि छन् ।
(१) नेपाल चरम आर्थिक भेदभावको लक्षणबाट ग्रस्त छ । किसानहरू, कामदारहरू तथा तल्लो आर्थिक तप्काका मानिसहरूले सास फेर्न पनि कर तिर्नुपर्छ । पानी पिउन पनि कर तिर्नुपर्छ । खानामा पनि कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् गरीबले बाँच्न कर तिर्नुपर्छ । किसानले खेतको कर तिर्नुपर्छ । उत्पादन गर्न बीउ र मलमा कर तिर्नुपर्छ र उत्पादन बजार लैजाँदा बेच्दा पनि कर तिर्नुपर्छ ।
यी यस्ता गरीब किसानहरूको वार्षिक व्यय शक्ति अठार हजार मात्र छ । अर्थात् उनीहरू प्रत्येक व्यक्तिले वर्षमा जम्मा १८००० मा जीवनयापन गर्नुपर्छ । तर शासकहरू अब नेपालमा थोरै मानिस मात्र गरीब छन् भन्छन् । देशको कूल आयको ३/५ प्रतिशत यी गरीबका लागि खर्च हुन्छ । तर देशका धनी २० प्रतिशतले ५५ प्रतिशत लगानी प्राप्त गर्दछन् ।
(२) शिक्षामा गरिएको लगानी निरर्थक भइरहेको छ । सम्पन्न वर्गका मानिसहरू आफ्ना सन्तान निजी स्कूलमा पढाउँछन् । यिनै निजी स्कूलका विद्यार्थीहरू प्राविधिक, चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल र व्यवस्थापक बन्छन् । गरीब पढ्न पाउँदैनन् । उनीहरू दास जस्तै विदेशीका सेवामा लाग्छन् ।
(३) कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारको पर्याय भएको छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक संगठन चलाएर राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर राजनीति गर्दछन् । उनीहरू जनताका सेवक होइन मालिक बनेका छन् ।
(४) राजनीतिक नेताहरूका लागि राजनीति व्यवसाय बनेको छ । यहाँ पार्टी खोलेर बसेका एउटै पार्टीका मानिसहरूमा पदको किनबेच हुन्छ । देशको ढुकुटी लुट्नु पर्ने भएकोले पार्टीहरूमा ‘गुटहरू’ निर्माण हुन्छन् ।
(५) न्यायपालिका गैरसरकारी संस्थाले चलाएका छन् । वकिलहरू भित्रै दलाली गर्ने वकिल ठूलो र महत्त्वपूर्ण भएको छ ।
(६) सार्वजनिक यातायात मृत्यु लिलाम गर्ने केन्द्र बनेका छन् ।
(७) अस्पतालहरू मृत्यु बेच्दछन् ।
अब के गर्न सकिन्छ त ?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्नेहरू नै निराशाको सिकार हुनुपर्ने खतरा देख्न थालिएको छ । यस प्रश्नको उत्तर दलाली गर्ने, विदेशीको चाकरी गर्ने, विदेशीको पैसा लिएर नेपालीहरूमा विभाजन गर्ने र धर्म संस्कृतिको नाश गर्ने मानिसले खोज्न सक्दैन । सशक्ति वृत्तभित्रको मानिस पनि हुँदैन । उसले सरकारका नीति निर्माणमा भूमिका पनि खेल्न सक्दैन, उसको पहुँच पनि हुँदैन ।
त्यसैले यी चुनौतीको डर र समस्याको डंगुर देखेर ऊ आफैं निराश हुन सक्तछ । यद्यपि देशलाई जोगाउने मानिसहरू यस प्रश्नको उत्तर खोज्नेहरू नै हुन् । माथि भनियो कि, यो देशको अस्तित्व तीनवटा कारणले रहेको छ ।
(१) पहिलो कारण हो अहिले पनि चुनौतीलाई चुनौती दिने र समस्यालाई परिवर्तनको ऊर्जामा बदल्ने मानिसहरू समाजमा थुप्रै छन् ।
(२) अहिले पनि देश बेच्नेहरूलाई नाङ्गो बनाउने र त्यसलाई दुत्कार गर्ने मानिसहरू छन् ।
(३) नेपालीहरूसँग समस्यासँग जुध्ने र एकपटक लडेपनि फेरि उठेर लड्ने ‘पुनर्ताजगी’ को गुण यथावत् छ, थुप्रैमा । अर्थात् सबै मानिस बेचिएका छैनन् । तर समस्याहरू र चुनौतीबाट अनभिज्ञ छन् । यदि यस सकारात्मक पक्षलाई हेर्ने हो भने, हामीले देशको निर्माणको खाका बनाउने र त्यसलाई लागू गर्न सामाजिक आन्दोलनको निर्माण गर्नुपर्दछ ।
१. नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रको इतिहासलाई जोगाउँदै आत्मसम्मान र आत्मगौरवपूर्ण ढंगले जीवनयापन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुने उद्यमशीलताको बाटो हिँड्नै पर्छ । यसको तात्पर्य हो कृषिको आधुनिकीकरण र कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि उत्पादकत्वको विकास गर्नु ।
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको जग कृषि नै हो । तर नवउदारवादी कार्यक्रम बोकेका नेपालका वामपन्थीहरू ‘कृषिको विकास र औद्योगिकीकरण’ होइन निजी क्षेत्रको विकास र ‘विदेशी जोडजाड’ उद्योगहरूलाई असीमित बैंकिङ ऋण लगानी गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछन् । नेपालमा कृषिमा लगानी गर्ने पुँजीको अभाव छैन ।
नेपालमा कृषि उत्पादनको खपतको अभाव पनि छैन । अतः कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानीद्वारा उत्पादनमा आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने हो भने, करीब एक खरबको आयात तत्काल प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । कृषिको यस्तो आधुनिक विकास र उत्पादनले नेपाली युवाहरूको विदेश पलायनलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
छोटो समयमा कृषि उत्पदनलाई उन्नत बनाउने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू निर्माण गरी लाखौं रोजगारी र उन्नत उत्पादनलाई विदेशी बजारमा पुर्‍याइ निर्यातको प्रवर्द्धनद्वारा थप आयात प्रतिस्थापित गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले तत्काल करीब एक खरब रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । दश अरबभन्दा बढीको मासु आयात भइरहेको छ । दश अरबभन्दा बढीको तरकारी र फलफुलको आयात भइरहेको छ ।
व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनका लागि कषि उत्पदनमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ किन सरकारको ध्यान गइरहेको छैन ? किन अन्य क्षेत्रको औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकताको कुरा भइरहेको छ ? त्यसैले देशको देशभक्त बौद्धिक जमातले स्वयम् जनतालाई आफ्नो घर घरमा बजारबाट कृषि उत्पादन आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकी आत्मनिर्भरतातर्फ लक्षित रहने चेतनाको अभियान तुरुन्तै थाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(२) कृषि पेसालाई अपमानित पेसाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, अल्प अव्यावहारिक र राष्ट्रको गौरव विरोधी मनोविज्ञान निर्माण गर्ने वर्तमान व्यापारिक शिक्षालाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षाको आमूल परिवर्तन विना नेपाली नागरिकहरूको उत्पादकत्वपूर्ण क्षमताको विकास गर्न कदापि सम्भव छैन । अतः शिक्षालाई प्रविधिमूलक बनाउने प्रयोजनका लागि कृषि, वनपैदावार, पशुपालन जस्ता क्षेत्रको विकासका लागि व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेमा सरकारी निकायहरू उत्पादनहीन स्कूलहरूका भवन, शिक्षक तालिम, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र कर्मचारी व्यवस्थामा अरबौं खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति ‘स्युडो’ बौद्धिक बनी गैरसकारी संस्थाको सञ्चालन गर्न र जानी नजानी नेपाललाई विभाजन गर्ने विदेशी संस्थाको ‘मोहरा’ बन्न पुगेको अवस्था छ ।
(३) ‘राष्ट्रको विकास’ जनताको देशभक्तिको भावनालाई उजागर नगरी केवल दिवा सपना बन्न पुग्छ । देशभक्तिको उजागर दुई कारणले अनिवार्य हुन्छ । पहिलो हो, देशभक्त उद्यमी, उद्योगपति, कृषक आदिले मात्र व्यापार, व्यवसाय र बजारको नैतिकतालाई कायम राख्न सक्तछ । अर्कातिर देशभक्त नागरिकले मात्र देशलाई विदेशी खेलको दुष्चक्रबाट जोगाउन सक्तछ ।
देशको आर्थिक विकास भनेको अर्थतन्त्रको उन्नत व्यवस्थापन गर्नु मात्र होइन । ‘सामाजिक रूपान्तरण’ आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य हो । अतः आर्थिक विकासको सबल आधार तयार गर्ने हो भने, प्रत्येक नागरिकलाई ‘राष्ट्रिय अनुशासनको दायरामा राख्नुपर्छ’ । यसले भेद्भावलाई अन्त गर्छ । नेपालको जनसंख्याको आधा हिस्सा महिला एवं दलितहरूमाथिका सामाजिक भेद्भावलाई उन्मूलन गरी उनीहरूलाई उत्पादनको औपचारिक क्षेत्रमा सरिक गराउने हो भने, पहिलो देशभक्तिपूर्ण अनुशासनलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ विकासको एजेन्डामा समावेश गर्नुपर्दछ ।
(४) नेपालको वर्तमान करीब आठ खरबको व्यापार घाटाको मुख्य कारण पहिल्याउनु आवश्यक छ ।
बुँदागत रूपमा भन्ने हो भने यसरी राख्न सकिन्छ : (क) सन् १९९० बाट लादिएको नव उदारवादले नेपाली उपभोक्ता र बजारतन्त्रलाई पूर्णरूपमा पथभ्रष्ट बनाइसकेको छ । नव उदारवादले आयातमा ढोका पूरै खोलेको छ । तर निर्यातमा संरक्षणवादी विकसित देशहरूले नेपाल जस्ता देशलाई बजारको ढोका पूरै बन्द गरेका छन् ।
(ख) आफ्ना नागरिकलाई खपत कम गर्ने अनेकौं संयन्त्रहरू प्रयोग गर्ने विकसित देशहरूले आफ्ना निम्न कोटीका सामानहरू नेपाली बजारमा थुपारेका छन् । एकातिर पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव फैलाएर बेलुका रक्सी र मासु खानै पर्ने बानी बसाइदिएका छन्, अर्कातिर नानाथरीका स्वास्थ्य हेरबिचारका सामाग्री बजारमा थुपारेका छ । यस अतिउपभोगवाद खोक्नका लागि राज्यले अर्थतन्त्रको नीतिमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(ग) विकृत अतिउपभोक्तावादकै कारणले नेपालमा रक्सी र बीयर अनि रासायनिक पेय पदार्थको उत्पादनले रेकर्ड तोडेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेमात्र अर्बौंको आयात प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ ।
तर पश्चिमी वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावमा परेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेता र सभ्रान्तहरूले जनपक्षीय अर्थतन्त्रको विकासको बाटो हिँड्न देलान् भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अनेकौं आधारहरू छन् । पहिलो कुरा त नेपालका अर्थशास्त्रीहरू अधिकारमुखी विकासको अर्थतन्त्रका पक्षमा उभिन नै चाहँदैनन् ।
‘म्याक्रो’ अर्थात बाहिरी खुल्ला अर्थतन्त्र विकास भयो भने, त्यसबाट बिस्तारै धनी हुन थाल्छन् भन्ने ‘दृष्टिकोण बोकेका अर्थशास्त्रीहरूले नेपाली अर्थनीतिलाई हातकडी लगाएर राखेका छन् ।
यस्तो अर्थतन्त्रले ‘देशलाई धनी बनाई गरीबलाई’ धनी बनाउने सपना बोक्दछ । यो धनीहरू र विकृत पुँजीपतिले समाजमा आफ्नो अधीन राख्न निर्माण गरेको तुरूप मात्र हो । यसकै परिणाम हो हाम्रा अर्थशास्त्रीहरू देशका सबै धनीहरूको धन जम्मा गरी जनसंख्याले भाग गर्दछन् र प्रत्येक गरीबसँग ‘८१४’ डलर वार्षिक आम्दानी छ भनी घोषणा गर्दछन् ।
वास्तविकता के हो भने विकासको पहुँच प्रत्येक परिवारलाई प्राप्त हुनुपर्दछ । विकास नेपाली नागरिकको अधिकार हो । यो राज्यको खेल होइन । प्रत्येक नेपाली नागरिक धनी भएमात्र नेपाल राज्य धनी हुन्छ । अतः प्रत्येक नागरिकलाई धनी बनाउने हो भने (१) प्रत्येक व्यक्तिको शरीर र व्यक्तित्वको अकुण्ठित सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।
जुनसुकै समयमा काम गर्दा पनि व्यक्तिको जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । तर यसतर्फ राज्यले किन्चित ध्यान दिएको छैन । सवारी दुर्घटना, अपराध आत्महत्या, चिकित्सकको लापरवाही, विषयुक्त खाद्यान्न जस्ता कुराले बर्षेनी हजारौ मानिस मरिरहेका छन् । सुत्केरी हुन नसकेर मर्नेको संख्या त्यति नै छ । बलात्कारका घटना उत्तिकै बढिरहेका छन् ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो उत्पादकत्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने उचित शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ ।
(३) प्रत्येक व्यक्तिलाई या त उत्पादनको साधन, या सिप या रोजगारी राज्यले दिनुपर्छ ।
(४) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवसाय रोज्ने अधिकार पनि राज्यले दिनुपर्छ । यी आधारभूत चारवटा अधिकारबाट व्यक्तिलाई सम्पन्न गर्नु नै गरीबीको रेखाभन्दा व्यक्तिलाई माथि ल्याउनु हो । यस अधिकारवादी विकासको अवधारणाले केही महत्त्वपूर्ण एवं आधारभूत सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयनको माग गर्दछ ।
(१) व्यक्ति र समाजको समानान्तर विकासको सिद्धान्त पहिलो सिद्धान्त हो । समाजले अवसर सिर्जना गर्दछ र व्यक्तिले क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ । अवसरको निर्माण गर्न समाजमा विकासका संरचना निर्माण गरिन्छ । जस्तै स्कूल, बाटो, बिजुली, अस्पताल इत्यादि । यी अवसरको सदुपयोग गर्दै व्यक्तिले क्षमता प्रवर्द्धन गर्दछ । जस्तै व्यक्तिले बिजुली प्रयोग गरी उत्पादन गर्दछ ।
(२) आधारभूत दिगो स्रोतको सिद्धान्त दोस्रो सिद्धान्त हो जसले व्यक्तिलाई उत्पादनको लागि पदार्थ प्रदान गर्दछ । तर यस्तो स्रोत दिगो हुनुपर्दछ ।
यी दुवै सिद्धान्तले कृतिको आधुनिकीकरणलाई नेपालको विकासको प्राथमिकता हो भन्ने देखाउँछन् । तर नेपालका अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण लाई प्राथमिकता दिएनन् । अहिले पनि सरकारको प्राथमिकता कृषिको आधुनिकता र उत्पादन वृद्धितर्फ मुखरित भएको पाइएको छैन । अब प्रत्येक नेपालीले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाललाई गरीबी, विदेशी र अराजकताको कुचक्रबाट जोगाउने हो भने, हामी नेपालीले आर्थिक विकासको अभियानलाई अबको आन्दोलन बनाउन सक्नुपर्छ ।
सार्वजनिक जग्गा हडप्न पूर्वमन्त्री नै सक्रिय, मिचेर बनाइएका घरटहरा भत्काउन शुरु